Marouane Fellaini Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Belgian Nhabvu Vatambi Marouane Fellaini Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhoti Genius iyo inonyatsozivikanwa neNickname; "Giraffro". Our Marouane Fellaini Childhood Indaba pamwe neSepold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira Upenyu Hwake Hwepakutanga usati wasvika mukurumbira, hupenyu hwehupenyu, hukama hwehukama, hupenyu hwemhuri nezvimwe zvinhu zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wese anoziva nezvekuona kwake kwemaitiro uye maitiro makuru asi vashomanana vanoona marouane Fellaini's biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Marouane Fellaini Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Marouane Fellaini-Bakkioui akaberekwa musi we 22nd weNovember 1987 muEtterbeek, Belgium. Ndiye Sagittarius nekuzvarwa.
Akaberekwa kuna amai vake, Hafida Fellaini uye baba, Abdellatif Fellaini (aimbova muchengeti webhasi uye mutyairi webhazi). Vabereki vose vari muMorocca vanobva kunyika yeTangier. Vakatamira kuBrussels kuti vawane vana vavo uye kutsvaga hupenyu hwakanaka.
Fellaini akakurira muBrussels pamwe chete nemapatya ake ainzi Mansour Fellaini (musashamiswa, iye mapatya).
Marouane Fellaini Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Career Start
Rudo rwekutanga rwaFellaini rwakanga rwuri zviitiko. Akatanga semutambo we 10,000-mita. Izvi akazvibatanidza nebhola raakatanga pazera re 8 yeAnderlecht academy. Somwana, aizomhanyira kuchikoro apo vaaidzidza navo vaifamba nebhazi kana motokari.
Zvisinei, baba vaFellaini Abdelatifatif, avo vaiva vadzidzisi vemauto pachake, vakatungamira mwanakomana wavo kubvuma bhora uye vachirega kuenda kure kure. Akateerera chido chababa vake uye akatora kuzvipira kwakakwana kwebhola.
Mumwaka wake wokutanga kuAnderlecht's Academy, akawana zvigaro zve 26 uye wechipiri akawana 37. Akanga ari kuAnderlecht's academy kusvika panguva ye10 asati asangana neMons, nemhaka yebaba vake kuwana basa idzva muguta.
Pazera re17, akasaina chibvumirano chake chekupedzisira ne Standard Liège. Ikoko, aizivikanwa nokuda kwekukwanisa uye kutonga kwake, izvo zvakamuita iye wepamusoro-soro bhokisi-ku-box pakati peBelgian First Division. Basa rake rakaguma kwaari kuti akunde Shoe Ebony mu2008, mupiro wakapiwa muchengeti mutsva wekuzvarwa kweAfrica.
Mushure mekuramba kufambira mberi kweManchester United, Real Madrid neBayern Munich, Fellaini akanyorera Everton muna September 2008. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Marouane Fellaini Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Bhuku rake
Vavengi varo vanopfeka maAfro wigs akawanda kuti vanomiririra kudada kwavo nekuda kwekukunda kwavo, Fellaini.
Fellaini's trademark Afro wig iri kushandiswa nemaoko akaisvonaka sekuonekwa pasi apa.
Marouane Fellaini Afro Wig wavabati vemaoko ndiyo yakanakisisa muguta
Fellaini wig yave iri nyaya inofarira pakati pevanhu veInternet kubva pakuvambwa kwake kusvika pakuonekwa. Mifananidzo yakafanana neyo iri pasi iri yakawira paIndaneti.
Marouane Fellaini anofadza chokwadi
Marouane Fellaini Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Upenyu hworudo rwaMarouane Fellaini rwakanga hwakaoma. Ndiye mumwe munhu anofarira hupenyu semurume asina kuroorwa. Pane imwe nguva, Lara Binet ndiye munhu akakosha zvikuru muupenyu hweFellaini.
Fellaini naVaBelgium Belgium Lara Binet vakagara pa-uye-off kwemakore, kusvikira vaine hukama hwakanaka pakati pa2012.
Lara naFellaini vakaputsa nguva pfupi mushure mekunge asayina vamiririri veLigeria League, mamwe magwaro akati vainge vakaroorana.
Binet yakanga yakazara Miss Liège mu2011. Aiva Wokupedzisira pa2011 Miss Belgium beauty pageant.
Fellaini akawana manzwiro akasiyana ehupenyu hwehukama hwake kubva paakaenda kuManchester United. Mumashoko ake ...
'Ndiri muYeverton, vakadzi vakanga vachikandira kwandiri, ' Fellaini akati. 'Yaiva yakawandisa. MuManchester, vanhu havandizivi zvakanyanya uye vanofarira kundibata nenzira inoremekedza.
Kunyanya ichangopfuura, ave ave naJeffers Roxanne. Akasangana naFellaini kuburikidza nemumwe shamwari. Jeffers ndiye wekare-musikana we rudo rat Ashley Cole. Ari kunyanya maari nokuti anofunga kuti vhudzi rake rakanaka chaizvo.
Fellaini naJeffers Roxanne
Marouane Fellaini Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Marouane Fellaini anobva kumhuri yepakati-kati yemhuri yakabatwa nababa vake, Abdellatif Fellaini. Izvi zvakanga zviripo mari yezvikwata zvebhora payakabhadharwa.
Baba vake, Abdellatif vakamboita mutambo weMoroccan sevatarisiri vemakwikwi eRaja Casablanca uye Hassania d'Agadir. Muna 1972 aida kuchinja kuEurope uye akasaina neBelgium yokutanga kambani KRC Mechelenz. Zvisinei, kambani yake yeMoroccan yakamuramba kuenda kuEurope.
Panzvimbo pokudzoka kuMorocco, Abdellatif akapedza basa rake rakaoma, akatamira kuEurope ndokuva mutyairi webhasi yekutengeswa kwevanhu veBrussels. Nhasi uno anozvikudza kupa vana vake mukana wokuzvarwa uye kukura muEurope. Abdellatif anofara hukama hwakanaka nevanakomana vake. Akatora nguva yekurega basa kubva kumotokari yebhazi kutarisira basa raMarouane.
Fellaini nababa- Abdellatif
AMAI: Hafida Fellaini ndiye amai vaMarouane Fellaini. Zvechikwata, tinoziva kuti haisi yechokwadi, asi iyo inotengeswa neInternet inoratidza mukadzi ari pasi apa amai vaMarouane Fellaini. Vose vanovonga wig waro.
Mukadzi wenhema waFellaini, Hafida Fellaini
The Brothers: Zita remunin'ina wake ndiHamza Fellaini. Iyeyewo nyanzvi yemhizha.
Hamza Fellaini (inoratidzika kurudyi)
Mansour naMarouane vanoratidzwa pasi apa vakafanana mapatya. Vose vaviri mapatya vanoda kufanana nemavhudzi akafanana.
Marouane Fellaini nehanzvadzi, Mansour.
Iwe, ivo vakafanana zvakatarisa, asi zvechokwadi kwete kureba kwake. Marouane akareba kupfuura Mansour.
Marouane Fellaini Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -The Image
Pane imwe nguva, Marouane Fellaini akazova mutevedzeri wemazuva ano kuti azviwanire asina kufanana sechidimbu cheunyanzvi hwemugwagwa ... zvinoshamisa nenzira yechiso chake chakanaka.
Marouane Fellaini Chidimbu cheAdhi- Gwer uso
Chiitiko ichi chakaitika apo vaBelgium vakafanirwa neRed Devils munguva yavo yekupedzisira yeSouth Cup yekupedzisira kuSaint Madrid.
Munguva yekukwikwidzana, Fellaini akarova pachiso nebhola mushure mekukwira kune musoro, uye unyanzvi hwemufananidzo wemufananidzo wakarehwa hunoreva kuti nguva yakakwanisa kuve yakananga kutorwa nokusingaperi. Mufananidzo weFellaini wakatsvaira chiso, muromo weagape mukunonoka kubva pakubata kwebhola, kwaiva kushaya nguva pfupi pane zvekugarisana nevamwe.
Nyoka yacho yakakurumidza kuenda kuhutachiona, ine hukama hwepamusoro hwepamusoro uye vamwe vashandi vevakomana vemauto vachitaura nezvemufananidzo. Kutevera mushure, Fellaini pachake akakurumidza kuziviswa nezvechifananidzo uye akasarudza kugovana nayo kuburikidza neAvid account yake yega.
Marouane Fellaini Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Kutsanya Kurwisana
Kungofanana naMesut Ozil, Fellaini anosarudza kuti Fast or not. Muzviitiko zvakawanda, haatsanyi. Iwe unogona kutsvaga muIndaneti kune vamwe vemaScottball mumakumbo ekunyengetera asi kwete paFellaini pasinei nokuti iye ari wedzinza reMoroccan rakapfuma yeIslam.
Kutsanya panguva yeRamadan kunoda vaMuslim saka vanoenda vasina zvokudya uye kunwa mvura kubva pakubuda kwezuva kusvika pakuvira kwezuva. Fellaini anofunga kuti zvinogona kuva nengozi zvikuru kwaari paanenge achitamba mune imwe mamiriro okunze akaita seBrazil mune mukombe wenyika 2014.
Zvakawanda kuvhiringidzwa kwevanhu vechiMuslim, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka naValon Behrami weSwitzerland uye Mesut Ozil yeGermany akambozivisa zvisarudzo zvavo kuti vasvetuka kutsanya nekuda kwehutano hwavo nehutano hwekutamba.
Mukudzivirira kwavo, mutevedzeri wemutungamiri weFederation of Muslim Associations muBrazil, Ali Zogbhi akati:
Sayenzi yakatojekesa kuti kana iwe uchiita muviri muviri usina kudya unosangana nezvinetso zvakakomba. Saka, zvinonzwisisika kubvumira vatambi kuti vasatsanya munguva iyi. "
Marouane Fellaini Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Zodiac Trait
Marouane Fellaini is Sagittarius uye ane zvirevo zvinotevera kumunhu hwake;
Marouane Fellaini's Strengths: Anogutsa, anofungidzira, pfungwa huru yekuseka
Marwaine Fellaini's Weaknesses: Zvipikirwa zvinopfuura zvinogona kununura, kushivirira zvikuru, zvichati chero chinhu pasinei nokuti unopindirana sei
Chii Marouane Fellaini anoda: Rusununguko, kufamba, uzivi, kuva kunze
Zvakaita Marouane Fellaini asingadi: Vanhu vanonamatira, vachimanikidzirwa, kubva-kumadziro mazano, zvinyorwa.
Tinovonga nekuverenga Marouane Fellaini Childhood Indaba pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!
Iweri Tielemans Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Thomas Meunier Childhood Indaba pamwe neSepold Biography Facts
Divock Origi Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts
Adnan Januzaj Urubhabhatidzo Mubhuku Plus Untold Biography Facts
Axel Witsel Nhoroondo yeChidiki Plus Untold Biography Facts
Dries Mertens Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Toby Alderweireld Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Mousa Dembele Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Jan Vertonghen Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts